Apple TV + pakupedzisira inotora kodzero dzefirimu yaMartin Scorsese | Ndinobva mac
Apple TV + pakupedzisira inotora kodzero dzefirimu yaMartin Scorsese
Pakati paApril takakuudza kuti Martin Scorsese aitsvaga mari yemufirimu wake mutsva "Vaurayi veRuva Mwedzi". Nyeredzi Robert De Niro naLeonardo Dicaprio, bhajeti rakagadziriswa rakanga rakanyanyisa uye makambani akambomutsigira neIrishman aive achikahadzika. Apple yatora mukana uye haina kufunga nezvazvo.
Apple yasvika pachibvumirano neanozivikanwa director director uye akasaina naye kuti yake inotevera firimu ive chete nhepfenyuro paApple TV +.
Kunyangwe iyo bhaisikopo "Vaurayi veRuva Mwedzi" ichizotorwa seyakasarudzika yezvinyorwa paApple TV +, ichave zvakare ichagovera kuParamount theatre uye ndichave neImperative Varaidzo zvakare semugadziri.
Apple inokunda kurwa neNetflix uye inounza Martin Scorsese
Saka Zvese zvakafanotaurwa zvataive takakuzivisa kare pakati pemwedzi wapfuura zvinozadziswa uye sezvatakataura panguva iyoyo, Apple yave kukwanisa kubata iyo nguva uye "tora katsi uende nayo kumvura."
Netflix ndiye mumwe mubati muhombe mukuwana kodzero yeiyi firimu nyowani, asi yaizeza nekuda kweiyo yapfuura firimu "MuIrishman" iyo yaisakwanisa kuunganidza mari yese yakaiswa mumitambo. Kusahadzika uku kwakaita kuti ibude nepakutanga.
Apple iri kubva pasimba kuenda pasimba neayo Apple TV + sevhisi. Iko kutora kwechipiri kunoitwa ne vatambi vane mukurumbira kuti ugone kuzadza sevhisi nezviri mukati. HBO Max yapinda mumakwikwi zvakanyanya nemazita anodarika zviuru gumi.
Apple inoenderera kubheja pane yayo huru yekudai. Anosarudza zvemukati zvakasarudzika pane kuzadza iyo grill nezvinhu zvisingabatsiri zvakanyanya. Nekuti, huwandu hwacho hwakanaka, asi zvisina kuburitswa zvirimo zviri nani.
Tiri kutarisira kupfurwa kweiyi firimu nyowani uye nyeredzi Tom Hanks,
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Apple TV + pakupedzisira inotora kodzero dzefirimu yaMartin Scorsese
Maitiro ekuvhura bhukumaki folda mumatepi nekukurumidza
Apple Inoburitsa Safari Technology Preview 107